Uzovela ‘owathumba, wabulala’ uthisha oyimbangi yakhe – LIVE Express
namacala okubulala nokuthumba lowo owayeyisoka lentombi yakhe, eWembezi, KwaZulu Natali.
Mhla ziyi-11 March 2016, kusolwa ukuthi u-Raymond Mabizela (47), nowayenguthisha e-Bergville, wayengwa yintombi yakhe, uFikelephi Ngubane (28), ukuba eze eWembezi.
Kusolakala ukuthi ngenkathi eseseWembezi wabe esethunjwa ngelinye isoka lika-Fikelephi kanti akazange esabonakala emva kwalokho.
Lo thisha wabe esemenyezelwa njengomuntu olahlekile.
Kuze kwathi ngomhla zingama-24 March 2016, kwatholakala isidumbu sakhe sesonakele, simbozwe ngo-carpet, eWembezi.
Uphenyo lwamaphoyisa lwaholela ekuboshweni komsolwa wokuqala, uFikelephi. Wabe esevela eNkantolo yeMantshi e-Estcourt kanti icala lakhe labe selihlehliselwa umhla ziyisithupha ku-May 2016 ukuze afake isicelo sebheyili.
ngoLwesihlanu, amaphoyisa ophiko lwe-uMlazi K9 Unit ngokubambisana ne-Durban Protection, bebesemkhankasweni wokuzingela umsolwa wesibili kuleli cala emva kokulunywa indlebe ngokubonakala komsolwa e-Sipingo, entshonalanga neTheku.
Umkhondo ubaholele esitobhini samabhasi khona eSipingo nalapho bebhadame khona umsolwa, zabe sezimkhalela.
uKhomishana wamaphoyisa KwaZulu Natali, u-Lieutenant General Mmamonnye Ngobeni, uthi kuyadumaza ukuthi iningi lamacala okubulala enziwa yilabo abasuke bethandwa yizisulu futhi zibathemba kakhulu.
“Izigameko ezifana nalezi azinasidingo, zizwisa ubuhlungu futhi ziwubulwane,” kusho uNgobeni.